Puntland oo ku eedeysay Somaliland inay la socoto Al-Shabaab la wareegay Gacan-maroodi+VIDEO – Idil News
Puntland oo ku eedeysay Somaliland inay la socoto Al-Shabaab la wareegay Gacan-maroodi+VIDEO
Dowladda Puntland ayaa ka hadashay maleeshiyaad katirsan Kooxda Al-Shabaab oo maanta la wareegay Degaanka Gacan-maroodi oo hoostaga degmada Yubbe ee Gobolka Sanaag.
Taliyaha Qeybta 9-aad ee Ciidanka Difaaca Dowladda Puntland ee fadhigoodu yahay Gobalka Sanaag S/ Guuto Cabdullaahi Cumar Canshuur, ayaa xaqiijiyay in Al-Shabaab gacanta ku hayaan Degaanka Gacan-maroodi, isla markaasna ay ka sameysteen Difaacyo qeybo kamid ah xaafadaha Degaanka.
S/Guuto Canshuur ayaa Sheegay in Maleeshiyaadka Al-Shabaab ee qabsaday Degaanka Gacan-maroodi ay soo gaartay inay tiradoodu gaaareyso 70 dagaallame, isagoona ku eedeeyay Maamulka Somaliland inay gacan saar la lee yihiin Al-Shabaab, ayna la socdaan dhaq-dhaqaaqyada ay wadaan.
Sidoo kale, Waxaa uu sheegay in Degaankan ay Maamuleysay Somaliland ayna la yaab ku noqotay markii ay soo gaartay in Degaanka Gacan-maroodi ay la wareegeen Argagixisada Al-Shabaab.
Degaanka Gacan-Maroodi ayaa hoostaga Degmada Yubbe ee Gobalka Sanaag oo qiyaastii 50-KM dhanka bari ka xigta Magaalada Ceerigaabo ee xarunta Gobalka Sanaag, waxaa gacanta ku hayay Ciidanka Somaliland oo bilo kahor ay ku dagaalameen Ciidanka Difaaca Dowladda Puntland.